Ahoana ny fanararaotana ny ranonorana | Green Renewable
Fomba hanararaotana ny ranonorana
Nuria | | Toekarena an-trano, Trano maintso, fanodinana
Ny ranon'orana dia manana toetra marobe izay mampety azy amin'ny fampiasana isan-karazany ao an-trano. Raha mipetraka amin'ny faritany be orana ianao, dia azonao atao ny manararaotra azy ary hanangona Ity rano ampiasaina any aoriana ity, dia tsotra kokoa noho ny toa azy, azonao atao ny mametraka fandroana tsotra fotsiny amin'ny vala ary mamela ny orana hilatsaka na hanatsara ny rafitra ary manangona ny ranonorana izay avy amin'ny tafo avy amin'ny tranonao.
Azo alefa ny ranonorana izay milatsaka amin'ny tampon-tranonao tatatra tondroina amin'ny fitoeran-javatra rakotra ka ny Agua aza maloto fa avelao ny lavaka hianjera avy ao amin'ny tatatra. Ny rano dia hahatratra petra-bola izay azo aseho na halevina, vita amin'ny beton na plastika na haingon-trano ary ny fahafahany dia miankina amin'ny fampiasana izay homenao azy sy ny habetsaky ny orana latsaka matetika ao an-tanànanao. Ilaina ny mametraka a sivana Mba hahitana ny ravina sy ny sisa mivaingana ary ny sivana iray hafa dia tokony hisorohana ny fidiran'ny biby.
Indray mandeha ao amin'ny petra-bola tsy maintsy mamorona tambajotra ianao ka zaraina amin'ny toeran'ny trano ilainao izany. Tokony ho loharanon-karena mifameno amin'ny tambajotra an-trano tany am-boalohany fa tsy tokony afangaro. Rehefa tapitra ny rano ao anaty tanky, ny switch dia ahafahan'ny rano avy amin'ny tambajotra mahazatra mivezivezy. Ny famolavolana ny tamba-jotra ranonorana dia mitodika any amin'ireo toerana tianao hanararaotana azy io, azon'ny Bomba. Misy orinasa mivarotra sy mametraka ity fitaovana ity na afaka manao izany ianao raha manana fahalalana momba ny fantson-drano.
Ity rano ity madio, maimaim-poana, tsy misy sokay, ary ny fanangonana azy dia tsy mihevitra ny fandaniana tafahoatra. Matetika no ampiasaina ny fampiasana azy trano fidiovana, milina fanasan-damba, fanasana vilia, rano ho an'ny dobo filomanosana, fanadiovana ny trano ary hanao ny antony (zavamaniry sy hazo) ary saha fianakaviana bebe kokoa maharitra.
Any amin'ny faritany toa an'i Galicia, izay matetika ny orana matetika dia be dia be ny fianakaviana nametraka rafitra fanodinana ranonorana ao an-tranony ka nahatratra ny tahiry Rano azo sotroina 50 isan-jato, tombony ho an'ny toekarena anatiny sy ho an'ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Fomba hanararaotana ny ranonorana
Liana aho amin'ny fomba fanaovana sivana amin'ny ranonorana voalohany
Ahoana ny fomba fanamoriana microwave sy fitsitsiana angovo